Led Module, လက္ခဏာများသည် Led မော်ဂျူးများ, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. Led Module မီးသီးကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:Led Module,လက္ခဏာတွေသည်ဦးဆောင်မော်ဂျူးများ,ဦးဆောင် Module မီးသီး,ဆိုင်းဘုတ်သည်ဦးဆောင်မော်ဂျူးများ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး > LED ကို Module
LED ကို Module ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Led Module, လက္ခဏာတွေသည်ဦးဆောင်မော်ဂျူးများ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဦးဆောင် Module မီးသီး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကာဗွန်အလွိုင်းတစ်ဦးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းမျိုး, graphene နှင့်ပေါ်လီမာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာအပူ graphene နှင့်လူမီနီယံအပူလွန်ကျူးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လျင်မြန်စွာပြင်ပကမ္ဘာမီဒီယာမှတင်ပို့မှုနဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်းအပူနိုငျသညျ, အစားလူမီနီယံ၏,...
Led Module, Led မော်ဂျူးများသည်လက္ခဏာတွေ, Led Module မီးသီး, ဆိုင်းဘုတ်သည် Led မော်ဂျူးများ အသိဉာဏ်အလိုအလျောက်အလင်းမှိန်ခြင်းစနစ်ကို LED Module LED မော်ကျူး၏နယူးအယူအဆ 1.The ထူးခြားတဲ့ acicular ရေတိုင်ကီ, 360...
တရုတ်နိုင်ငံ LED ကို Module ပေးသွင်း
အဆိုပါထူးခြားသော acicular ရေတိုင်ကီ, 360 ဒီဂရီလွန်ကျူးသေးငယ်တဲ့လေတိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဆိုပါ LED ကို chip ကို 50000 နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်သေချာ high အပူလွန်ကျူးထိရောက်မှု။
Light≥90LM / W ကို
အဆိုပါ 2.3.4 လမ်းသွား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ရှုခင်းဆီမီးခွက်ကိုက်ညီ, floodlight ဆက်ကပ်အပ်နှံ lens.Ensure ပြင်းထန်မှုနှင့်တူညီနေမှုဖြစ်သည်။
တောက်ပအညွှန်းကိန်းများကိုသိသိသာသာရိုးရာမီးခွက်၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သောလျှောက်လွှာအခြေအနေနှင့်တပ်ဆင််ထမ်းများအတွက် power supply problems.Low တောင်းဆိုချက်များကို၏ဖယ်ရှားရေးမူရင်း LED မော်ကျူးအရွယ်အစားလျှော့ချပေးပါတယ်။
Power: 30W, 30W, 15W, 15W
ဖွဲ့စည်းပုံအရွယ်အစား: 135 × 100 ဦး× 40 မီလီမီတာ, 208 × 74 × 49 မီလီမီတာ, 125 × 58 × 30mm, 380 × 40 × 25mm
မှန်ဘီလူးအရွယ်အစား: 186 × 64 135 × 100 မီလီမီတာ, မီလီမီတာ, 125 × 58mm, 355 × 40 မီလီမီတာ
input ဗို့: 220 V ကို, 220 V ကို, 220 V ကို, 220 V ကို
input လက်ရှိ: 0,132 တစ်ဦးက, 0,132 တစ်ဦးက, 0,123 တစ်ဦးက, 0,125 တစ်ဦးက
အလင်းအား flux: 2760 LM, 2400 LM, 1230 LM, 1300 LM
အလင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု: 92 LM / W ကို 80 LM / W ကို 82 LM / W ကို 86 LM / W ကို
အရောင်အပူချိန်: 5000 K သည် 5000 K သည် 5000 K သည် 5000 K သည်
Power ကအချက်: 0.99 PF 0,98 PF 0,98 PF 0.99 PF
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40 + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, -40 + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, -40 + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, -40 + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Led Module လက္ခဏာတွေသည်ဦးဆောင်မော်ဂျူးများ ဦးဆောင် Module မီးသီး ဆိုင်းဘုတ်သည်ဦးဆောင်မော်ဂျူးများ Led Module Bulb